Article submitted by: minkyaw thuyein on 12-Apr-2013
မြန်မာမွတ်စလင်နှင့်အယ်(လ)ကေဒါ၊ တာလီဗန် ?
ပြောရမှာကတော့ မခက်ပါဘူး ၊ မြေ့ပာခြင်လို.သာနေတာ ။ နားလည်ဘို.လဲ မခက်ပါဘူး။ ချက်ဆိုနားကွက် က မီးတောက်တယ်လို.ပြောမလား၊ ပါးစပ် ဟရင် အူဘယ်နှခွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သိတယ် လို.ပြောရင်ကော ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်ကြီး လွန်းးရာရောက်သွားလိမ့် မယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအပါ အ၀င် ဗုဒ္ဒဘာသာ
န်ိင်ငံတွေ ဆိုတာ ရှိကြပါတယ်၊ အားလုံး ယေဘုံယျအားဖြင့်အေးအေးဆေးဆေး
ဘဲ၊ နိုင်ငံသား အများစု ယုံကြည် ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကို အခြေခံပြီး နိုင်ငံကို
လည်း ဘာနိုင်ငံ ညာနိင်ငံ လို. အစြွဲ့ပူ ခေါ်ဝေါ်ကြခြင်းဖြစ်တယ် လို နားလည်
ထားကြ တယ်။ အရာရာမှာ နားလည်မှုဟာ အရေးအကြီးဆုံးပေါ့။
ဗုဓ္ဒဘာသာနိုင်ငံမှာ ဗုဓ္ဒဘာသာ ဥပဒေနဲ.အုပ်ချုပ်တယ် ဆိုတာမရှိသလိုခရစ်ယန်
နိုင်ငံမှာလည်း ခရစ်ယန် ဥပဒေနဲ့ ရှိတယ်လို.မကြားဘူး ဘူး။ ဘ၀တပါြးေ့ပာင်း
သွား သူ ၀န်ကြီးချုပ် ဟောင်းဦးနု က မြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဓ္ဒဘာသာနိုငံရယ်လို ကြေ
ငြာခဲ့တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံက ခရစ်ယန်တွေ မွတ်စလင်တွေ နေမထိ ထိုင်မသာ ပွစီ ပွစီ လုပ်ကြတယ် ။ ဘာ သဘောလဲ. သူတိုစိတ်ထဲမှာ ဘာရှိသလဲ ဆိုတာ သူတိုဘဲ သိမယ်၊ တဖြေးဖြေးနဲ့ ပေါ်လာတာတွေ လဲ တွေ ခဲ့ ရတယ် ။
စကားစပ်လို့ြေ့ပလိုက်ရအုံး မယ် မြန်မာ နိုင်ငံဟာ လက်ယာကိုင်းကျွန်းလုပ်ကိုင်
br>တဲ့ စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံတခု၊ တောင်သူလယ်သမားတွေဟာ ကျွှဲ နဲ့နွားနဲ ဖက်ပြီး ရုန်းကန်နေကြရတယ် ၊ ကျွဲနွားဆိုတာ မရှိ မဖြစ်တဲ့ ပစ္စည်းဘဲ။ ဒါကြောင့် ကျွဲ နွားကို လူ စာဘို. သတ်ဖြတ်ရောညင်းချခြင်း မလုပ်ရ ဆိုတဲ့ သားသတ်မှု ကာကွယ်ရေး ဥပဒေရှိပေမဲ့ မွတ်စလင်တွေ ဥပုဒ်ထွက်လို.ဘက္ကရစ်
အစ် တဲ့ အခါ. ဘာသာရေးအရ သတ်ဖြတ်ခွင့်ပြုခဲ့ ရပေမဲ့. ချမှတ်ပေးတဲ့ စည်းမျဉ်း ကိုတော မထိမ်းပေးနိုင်ဘူး။ သားမွေးနိုင်တဲ့ နွားမဒန်း၊ အလုပ်လုပ်
နိုင်တဲ့ နွားသိုး တိုကို မသတ်ဘို. တားမြစ်ထားတယ်။ တခါ နွားအိုကြီးတွေ ကျပြန်တော့ စားသုံးသူ ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုကသေမဲ့ အနာရောဂါ ကင်းရှင်းရမယ်ဆိုတာတွေ ဘဲ။ စည်းမျဉ်းကျင့်ထူံး တွေဟာ စာရွက်တွေပေါ်မှာ သာရှိတယ် တကယ်လိုက်နာကြတာ မဟုတ်ဘူး။ အကျယ်အကျယ် အငြိမ်းဖွယ် မဖြစ်စေခြင်လို လက်ပိုကနေခဲ့ ကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ တချို.မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေကတော့ သူတိုနိုင်ငံကို အစ္စလန် နိုင်ငံတော်လို.ကျေငြာပြီး အစ္စလန် ဥပဒေနဲ အုပ်ချုပ်တယ်။ ဘာလဲ ဆိုတာက
လူတိုရဲ့ သဘာဝဟာ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ရှာကြံစားသောက်ကြတယ် ဆိုတာ လူတိုင်း သိရှီလက်ခံထား တယ်။ အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂါလီတွေက မြန်မာနိုင်ငံ
သားဖြစ်ခြင်ပါတယ်၊ မြန်မာနိုငံငံမှာနေလိုပါတယ်ဆိုတော့၊ စဉ်းစားစရာဘဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံကိုတိုးတက်စေဘို. သူတို တတပ်တအား ပါဝင်ဆောက်ခြင်လို.လား? သူတိုနိုင်ငံ သူတို.လူမျိုးးထက် မြန်မာတွေကို ပိုချစ်တယ် မေတ္တာထား
တယ်တဲ့ လား ၊ တိုးတက်စေလိုတဲ့မွန်မြတ်တဲ့ စိတ်နဲ့လား၊ ဘုရားလဲဖူး လိပ်ဥ
လဲ တူးဆိုသလို သူတိုရဲ့ ဘာသာရေး လူမျိုးရေးအရ နယ်ချဲ့ခြင်လို.လား ?
မြန်မာနိုင်ငံ့အရေးရှုတ်ထွေး နေတဲ့ အချိန်မှာ ဖိအားတွေပေးလာ၊ လုပ်မှား
ကိုင်မှား ဂယောက် ဂတန်းတွေ ဖြစ်အောင် နိုင်ငံရေးအရ လူမျိုးရေး အရ ဘာသာရေးအရ လှုံ.ဆော်သွေးထိုးတာတွေ လား၊ မြန်မာတွေကို အပျော့ကွက်
နှိုက် အရှိုက်ထိုး အလဲ ဆော်နေတာလားဆိုတာတွေ စသဖြင့် အဖက်ဖက်က အကွက် စေ့အောင် ဒို.အားလုံး ခေါင်းအေးအေးထားပြီး ရေတိုရေရှည်တွေ အတွက် ထည့်သွင်း စဉ်းစားကြရမယ်။
တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံး နိုင်ငံလို.သတ်မှတ် ခံထားရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုမှ သူတိုက လာခြင်ကြပါတယ် နေခြင်ကြပါတယ် ဆိုတော့ တမျိုးကြီးဘဲ. သူတိုကို ဘယ်မွတ်စလင်နိုင်ငံကမှလဲ လက်မခံ ကြဘူး. ဆိုတော့ အကြောင်းထူးတော့ ရှိလိမ့်မယ်. မြန်မာတွေလဲ နိုင်ငံတကာကို ပြေးကြပြီး အဖြစ်မှန်တွေ ရော လန်ကြုတ် တွေကိုပါ့နိုငံအချို. က နွေးထွေးစွာ လက်ခံ ထားတယ်၊ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်(စ) တွေ NLD ရဲ့ထောက်ချက်နဲ. ပါတီဝင် ကပ်ပြား မရှီကြလို.ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ရိုဟင်ဂျာ ပြသနာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကေါ်မရှင်ကိူ မစုကြည်ဦးဆောင်လိုက်
ရင်ပြသနာ ပြေလယ် သွား စရာရှိတယ်။ မစုကြည်လဲ မွတ်စလင်ဘာသာ ၀င်
နိုင်တယ် ဆော်ဒီမှာ ရေနံ တတွင်း လက်ဆောင် ရနိုင်တယ်၊ မြန်မာမှာလဲ လက်တူးတွင်းလဲ ရနိုင်တယ် ၊ ပါတီမှာ ရံပုံငွေတွေ တောင်လို ပုံနေတယ် တဲ့။
ဘင်္ဂလာဒါ(ရှ) ၊ ကာတား၊ ဒူဘိုင်း လေဆိပ်တွေရောက်ရင် ခဏ နားတုန်း မျက်စေ့လေးများဖွင့် နားလေး စွင့်ထားလိုက်ကြစမ်းပါ ၊ ခေါင်းက ခြေထောက်
ထိဖုန်း အာရပ် ၀တ်ရုံဖြူနဲ့ ခေါင်းခြုံမှာ အနက်ရောင် နဖူး စည်း စီးထားတဲ့ အာရပ်ကြီး ဟာ သူ.မိသားစုနဲ့ မြန်မာလိုစကားတွေ ဖေါင်နေရင်း ၀တ်ရုံချွှတ် မြန်မာဝတ် စားဆင်ရင်မှူကို ပြန်ပြောင်းပြီး သူကိုယ်သူ မြန်မာယောင် ဖန်ဆင်း
လိုက်တာ. ဂေါတမယောင် ဖန်ဆင်းပြ တဲ့ မါရ်နတ်တောင် အရှုံးပေးရ
မက္ကာကို ဘုရားဖူးသွားတာဟာ ဘာဖြစ်သလဲ။ ဟာဂျီ . ဟာဂျီမ သွားလုပ်တာ၊ ကုသိုလ်လုပ်တာပါဆိုတော့၊ ဘုရားလဲဖူး လိပ်ဥလဲ တူးဆိုတဲ့စကားအရလိပ်ဥ ဘယ်လောက်ပါလာသလဲ လို.မေးရင် အနာပေါ်ဒုတ်ကျ စော်ကားရာများ ရောက်နေမလား ။ ဘယ်သူကိုမှ မစော်ကားဘူး။ နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ နိုင်ငံတော်
နဲ့နိုင်ငံသား တို.လုံခြုံရေးအတွက် နားစွင့် မျက်စေ့ဖွင့် တာဝန်ရှိပုဂိုလ်တွေကို ပံ့ပိုးကူညီ၊ ကိုယ်ကိုတိုင်လဲ နိုးနိုးကြားကြား နဲ့ဥပဒေအတွင်းက လုပ်သင့်တာ
ဒီနေ.ကမ္ဘာပေါ် စစ်ပွဲတွေ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေတာမှာ ပြောရမယ် ဆိုရင် မွတ်လင်တွေနဲ.ခရစ်ယန်တိုရဲ ခရူးစိတ် စစ်ပွဲဆိုတာတွေဘဲ၊ ၁၀၉၆ ခုနှစ်က စဖြစ်ကထဲက အခု ထိ ပြီးတယ်လို.မရှိဘူး။ အမည်နာမ သာ ပြောင်းသွားတယ် ။ ငပွကြီး တွေကတော့ ဒိုင်ခံ ပါနေရက် ဘဲ။ အကြမ်းဖက်သမားတွေ ဆိုတာ သိရအောင် သူတို့မှာ အများထက်ထူးပြီး နဖူးမှာ ဂျိုပေါက်နေသူတွေလဲ မဟုတ်
ဒို.နိုင်ငံနဲ. ဒို. လူမျိုးတွေဟာ အများစု က ဗုဓ္ဒဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်ကြတယ်. အရာရာမှာ သီးခံကြတယ် . သိမ်မွေ.ယဉ်ကျေး နူးညံသူတွေ သူအလိုက် သိတတ်သူတွေ ဖြစ် တယ် ၊ ဒီလို အကျင့်ကောင်းတွေ စရိုက် ကောင်းတွေ ရှိတာကို တခြားသူ အချို.က ဒို.ကိုပျော.ညံ့သူတွေ လို ယူဆကြတယ် ။ အမျိးမျိုး လက်တဲ့ စမ်းကြတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တာလိဗန်တို.၊ အယ်(လ)ကေဒါတို.ရှုတ်နေတဲ့ချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ စစ်အစိုရ လက်အောက်မှာရှိပြီး သူပြသနာတွေနဲ့သူ ရှုတ်နေခဲ့ တာဘဲ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု က ဖမ်းပြီး နီးရာ အကျဉ်းစခန်းတွေမှာ စွဲချက်မတင် အမှု မစစ် ဘဲ ထည့်ထားတဲ့. တာလေဘန်၊ အယ်(လ်)ကေဒါ ဆိုတာ တွေဟာ အမေရိကန်/ အင်္ဂလိပ်နဲ့ ဆော်ဒီနိုင်ငံသားတွေလဲ ပါတယ်လို.သိရတယ်၊ တာလေဘန်၊ အယ်(လ)ကေဒါ တွေ အကြမ်းဖက်သတားတွေ နိုင်ငံတကာမှာ ရှိကြတယ် ၊ သူတိုအချင်းချင်းလဲ အဆက်အသွယ်တော.ရှိကြတယ် လို သတင်းတွေက ဆိုတယ်၊ အကြမ်း ဖက်သမားအဖြစ် အီရန် ၊ အီရတ် ပါကစ္စတ်နဲ့ အခြား မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေမှာ အမေရိကန်ဆန်.ကျင်ရေး နဲ့ ဂျီဟတ် စစ်ပွဲအတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သူတွေ လို. အဆိုရှိတယ် ၊၊
ဒီလိုဆိုရင် သူတိုကိုသူတို. ရှိုဟင်ဂျာလို.ဆိုပြီး လက်နက်ကိုင်. မြန်မာနိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့မူဂျာဟစ်တွေ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာတွေဟာ တာလေဘန်တွေ လား၊ အယ်(လ)ကေဒါတွေလား ၊ဘယ်သူတွေကလေ့ကျင့်သင ကြားပေးတာလဲ၊ လက်နက်တွေ ငွေတွေ ကို ဘယ်သူက ထောက်ခံ ပံ့ပိုး.နေတာလဲ ဆိုတာ ဖေါ်ထုတ်ဘို. ပြည်သူလူထုကို အသိပေးဘို.အချိန် တန်နေပြီ ဖြစ်တယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံ ကျေးရွာတွေ အပါအ၀င် မြိုကြီး မြို.ငယ်က မွတ်စလင် ဗလီတွေ၊ မော်လ၀ီဆရာတွေ မွတ်စလင် ဘာသာဝင်တွေထဲမှာ တာလီဘန်တွေ၊ အယ်(လ)ကေဒါ တွေ ဘယ်လောက် ထိုးဖေါက်ဝင်ရောက်နေပြီလဲ ဆိုတာ ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ ၊
၂၀၁၀ ခု အစိုးရ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာတာဟာ၊ နွေမိုးကြီး ရွာလိုက်သလို မြေ အောင်း သတ္တ၀ါတွေ၊. မြေမြုတ် နေတဲ့ သစ်ဥ သစ်ဖုတွေ အပင်ပေါက်လာလို. ဘာဘဲ ညာဘဲ ဆိုတာလဲ သိလာရတယ် ၊ မြေအောင်းသတ္တ၀ါတွေ၊ သစ်ဥသစ်ဖု အမျိုးအစားတွေ သိလာရတော့ တာဝန်ရှိသူတွေ ဘာလုပ်ရမယ်၊ ဘာကိုင်ရမယ် ဆိုတာ ၊ ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ရမှာတွေ မျှော်လင့်ရမှာတွေ၊ ပြင်ဆင်ရမှာတွေ သိလာရ တာပေါ့ ။
ပျော် ပျော် ပါး ပါး ပေါ့ ၊